ỌTỤTỤ AHỤ: Martin Vrijland
Egwu nuklia nke North Korea na nke kachasị egwu mmadụ
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 Ka 2017	• 29 Comments
N'ime izu ole na ole gara aga, akụkọ ahụ na mgbakwunye na ntuli aka ndị France na-eche banyere agha ndị agha United States na-eyi megide North Korea. Mba ahụ dị egwu na mberede n'ihi na ọ ga-emetụta mmepe nke ngwá agha nuklia na nke ahụ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na a na-akpọ gị America, ma ọ bụ ezigbo onye ọrụ [...]
Ị gaghị emegide usoro ahụ, mana ị ghaghị ime nke ọma n'ime ya
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 Ka 2016	• 1 Comment
Ọtụtụ ndị na-eche na ị gaghị emegide "usoro" ahụ, mana ị ghaghị ịchọta ụzọ isi nwee ọganihu. Ị nwere ike, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, chọta ụzọ iji nweta ego na ma ọ bụ n'ime usoro ahụ n'ime usoro dị ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'ezie eziokwu na mgbe ị na-agbanye mmiri ọgba aghara, a [...]
Kedu ihe na-ezighi ezi na echiche nke ọchịchị gọọmenti etiti?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 March 2016	• 16 Comments
The ajụjụ m na-enweta bụ: "Gịnị bụ ihe na-ezighị ezi na a centralized ọchịchị ụwa?" Mgbe ụfọdụ, ọ kwukwara ihe dị ka: "E nwere ka ọtụtụ mfe ndị ugbu a chọrọ ozugbo mere na ka bara uru ma ọ bụrụ na ị na-zuru ụwa ọnụ nwere otu iwu ahụ? "Ajụjụ bụ isi dị mma, ị ga-asị. Na [...]
Ngwongwo ihe oriri na-esi ísì ụtọ Nano na nyocha Google maka anwụghị anwụ
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 February 2016	• 12 Comments
Google ejirila mkpụrụ ndụ ihe nketa dị elu chọpụta anwụghị anwụ. Google bu uzo 'okporo uzo' dika ndi madu bu Ray Kurzweil nekwu okwu nke bu okwu 'singularity' ma kwuo na ndi mmadu no na 2045 rutere n'adighi anwu. Tupu mgbe ahụ, akọrọ m na ha achọpụtawo na koodu DNA nwere ike ịtọgharịa site na [...]
Ihe nchoputa 'uzo abua' banyere ugha nke ihe n'eziokwu
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 February 2016	• 20 Comments
Ihe niile gbara gị gburugburu, ọbụna ahụ gị, ka e kere mgbe ị ghọtara ya. Nke ahụ bụ nkwupụta nkwuwa okwu. Otú ọ dị, a na-akwado nkwupụta a site na nchọpụta sayensị na nchịkọta physics. Ndị ọkà mmụta sayensị nọ n'ụwa nile egosiputawo nyocha nke a ọtụtụ narị ugboro, n'ihi na ọ dugara n'ekweghị ekwe na n'otu oge ahụ dị ịtụnanya. [...]
Nkọwapụta bụ ihe na-adịghị mkpa, ihe nile na-ewere ọnọdụ na 'uche'
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 22 July 2015	• 8 Comments
'Nkọwapụta ahụ adịghị mkpa, ihe nile na-ewere ọnọdụ n'uche', bụ okwu m nụrụ n'izu a ma chee na ọ bara uru. Ikwu okwu banyere usoro ihe omimi na ihe ozo bu ihe di oke mkpa; iche echiche banyere odidi ike na ụwa adịghị mkpa; ụdị ọ bụla nke ahụmahụ na-ewere ọnọdụ n'ime [...]
Mkparịta ụka dị n'etiti mmadụ na mmalite ya
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 June 2015	• 19 Comments
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na ndabere nke m nkọwa nke kwantum physics na "Ugboro abụọ nchawa Nnwale" (ịhụ ebe a), ọgwụgwụ pụrụ ịbụ na m nwere a deterministic ele ndụ anya, ebe ihe nile dị naanị a ntule na na mmadụ bụ na-enwe ike natara "eziokwu" dị ka oru ngo a ụdị hologramụ, bụ a [...]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 April 2015	• 46 Comments
N'ọtụtụ okpukpe, a na-akpọkarị 'mmụọ, mkpụrụ obi na ahụ'. Ya mere, ọtụtụ ndị mmadụ anụwo banyere okwu ndị a, mana ọ ga-esiri ike ịkọwa nke abụọ, ebe anyị niile maara ihe anụ ahụ bụ. Mụ onwe m akọwawo ahụ anyị dị ka ihe dị ndụ na kọmputa na [...]
Ihe niile n'okpuru anyanwụ dị na ụda
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 April 2015	• 9 Comments
'Ihe niile n'okpuru anyanwụ dị na ụda'; bụ ihe Pink Floyd na-abụ abụ na abụ 'Eclipse' ha. Ihe niile n'okpuru anyanwụ 'na-akụ'. Kedu ihe ha ga-ekwu na nke ahụ? Emere m otu isiokwu n'ihu (lee ebe a), ma e nyere m mmụọ nsọ taa iji laghachi na ya. Ọ bụrụ na ihe niile [...]
Kedu ka ị ga - esi kpochapụ na matrix ma ka na - adị n'ime ya?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 April 2015	• 4 Comments
Na September 2014 m natara - ka aanleidling nke m isiokwu na matriks - ọtụtụ ugboro ajụjụ nke na-agụ na kachasi mkpa: "Olee otú m na-ewepụ m si matriks na m ka nwere ike na-adị ndụ na matriks" ka ihe atụ e nwere onye na-esote ajụjụ [quote] m na mmasị ruo oge ụfọdụ ugbu a [...]
Nleta ha: 2.593.876